Mbara ala dị n'ime: gịnị bụ ha na njirimara bụ isi | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ezo aka na mbara ala niile na-agba anyanwụ gburugburu na ndị mejupụtara ya anwụ, anyị kewara ha n'ime mbara ala dị n'ime na mbara ala ndị dị n'elu. Mbara ala dị n’ime bụ ndị dị n’akụkụ kacha nso n’anyanwụ. N'aka nke ọzọ, ndị exteriors bụ ndị nọ n'ihu. N'ime otu mbara ala dị n'ime anyị nwere ihe ndị a: Earth, Mars, Venus y Mercury. N'ime otu mbara ala ndị anyị nwere ihe ndị a: Saturn, Jupita, Neptune y Uranus.
N'isiokwu a anyị ga-elekwasị anya n'ịmụ njirimara niile nke mbara ala dị n'ime.
1 Njirimara nke mbara ala dị n'ime
2 Mbara ala ime
Njirimara nke mbara ala dị n'ime
Dị ka anyị kwuru ná mmalite nke isiokwu a, ndị a bụ mbara ala ndị ahụ dị na akụkụ dịdebere anyanwụ. Na mgbakwunye na ịkekọrịta ọnọdụ a maka anyanwụ, ìgwè nke mbara ala dị iche iche nwere njirimara ndị ọzọ. N'ime njirimara ndị a, anyị na-ahụ nha nha, nha nke ikuku ya ma ọ bụ ihe mejupụtara ya.
Anyị ga-enyocha ihe ndị dị iche iche njirimara nke mbara ala dị n'ime. Nke mbu, ha pere ezigbo mpe ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na mbara ala ndị dị n’elu. A maara ha aha mbara ala dị iche iche ebe ọ bụ na silicates bụ ihe mejupụtara elu ha. Silicates ndị a bụ mineral nke na-etolite nkume. N'ịbụ nke ndị nwere nnukwu mineral ndị a kpụrụ, enwere ike ịsị na mbara ala ndị a nwere nnukwu njupụta. Dkpụrụ njupụta dịgasị iche n'etiti 3 na 5 g / cm³.
Njirimara ọzọ nke mbara ala dị n'ime bụ ntụgharị ha na axis. N'adịghị ka mbara ala ndị ọzọ, ntụgharị ya na axis ya dị nwayọ nwayọ. Nke mbara ala Mars na ụwa were awa 24 iji tụgharịa onwe ya, mgbe nke Venus bụ ụbọchị 243 na nke Mercury bụ ụbọchị 58. Nke ahụ bụ, maka Venus na Mercury ka ha nwee ike ịgbanwere usoro nke aka ha, ụbọchị ndị ahụ ga-agabiga.
N'ime uwa makwaara site na aha nke mbara ala telluric. Nke a bụ n'ihi na ntọala nke mbara ala ndị a mejupụtara ụwa na okwute. Naanị ndị nwere ikuku bụ Mars, Venus, na Earth. Ihe ejiri mara mbara ala ndị a bụ ọkụ na-enye ike dị ntakịrị karịa ka ha n’enweta n’anyanwụ. Aha ozo ejiri mata mbara ala ndia bu site na aha umu obere planet. Aha a sitere na oke ya ma e jiri ya tụnyere oke njupụta nke mbara ala ikpeazụ n'ime sistemu nke igwe.
Ha nwere njirimara ụfọdụ jikọrọ ọnụ, dịka nhazi na ngwakọta yiri ya, otu akụkụ etiti na akụkụ dị iche iche nke na-adịgasị iche n'otu akụkụ site na mbara ụwa ọzọ.
Ọ bụ nke mbụ na ndepụta nke mbara ala dị n’ime. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ ụwa nke kachasị nso ịnọ na sistemu igwe niile. Ọ dị n'ebe dị anya banyere ihe gbasara mbara igwe 0.39 nke anyanwụ. Bịaru anyanwụ nso na ịnata ike dị ukwuu, enweghị ikuku. Nke a na-eme ka ihu elu nke mbara ala a dị elu nke ukwuu n’ụbọchị ma na-adịkwa ala n’abalị. Enwere ike ịhụ okpomọkụ nke ogo 430 n'ụbọchị na -180 degrees n'abalị. Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, na ọnọdụ a dị na ọnọdụ okpomọkụ, eziokwu ahụ bụ na e nwere ndụ na mbara ala a bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha.
Otu njirimara nke Mercury nwere bụ na o nwere njupụta kachasị elu n'ime mbara ala dị n'ime. Isi ya mejuputara igwe nwere igwe di elu ma isi ya di otutu ebe nile nke mbara ala. O nweghi satịlaịtị na-agagharị na ya na otu n’ime ihe ndị mere ka ọ dị mma bụ ọnụọgụ nke oghere na oghere nwere elu ya. Emebewo crat a n'ihi oke ihe ndị na-adaba na ya ebe ọ bụ na enweghị nchekwa dịka ọ na-enweghị ikuku. Otu n’ime oghere ndị kachasị kpụrụ bụ ihe dịka kilomita 1600 n’obosara ma kpọọ ya Platina Caloris. Ebe ọ bụ na amachaghị nke ọma, echere ya na ọ nwere ike ịbụ ugwu mgbawa.
Ọ bụ mbara ụwa nke abụọ n'ime otu ndị kacha dịrị nso na anyanwụ. Ọ dị n'ebe dị anya nke 0.72 mbara igwe nkeji nke anyanwụ. Njupụta ya na nkebi ya ruru nke ụwa. N'adịghị ka Mercury, Venus nwere ikuku. Ihe mejuputara ya karbon dioxide, nitrogen ma obu ihe ndi ozo dika hydrogen sulfide.
Enwere ike ịhụ mkpuchi igwe ojii na-adịgide adịgide. Njirimara ndị a bụ n'ihi ikuku ya ebe ọ bụ na mbara ala ezigbo ọkụ na okpomọkụ dị elu karịa ogo 460. Ọnọdụ ikuku ya dị gburugburu ụkpụrụ dị n'etiti 93 ruo 200 hPa. A na-eche na n'oge gara aga ọ nwere ike ịnwe mmiri mmiri, mana atụfuola echiche ahụ taa. Otu ihe ịmata ihe ụwa a nwere bụ na ntụgharị asụsụ ya pere mpe karịa ntụgharị.
Obere ikwu banyere mbara ala a anyị na-amabeghị. Otú ọ dị, anyị ga-eme ụfọdụ nyocha nke atụmatụ ndị ahụ. O no na mpaghara 1 astronomical unit site na anyanwu. O nwere satịlaịtị a maara dịka Ọnwa. Ihe mkpuchi nke elu ụwa mejupụtara 76% mmiri. Ọ nwere ọdụ magnetik nwere ike dị egwu. Ọ bụ naanị ụwa ebe a maara ndụ dị ka ikike ịmụ nwa, mmegharị, ikike metabolic na ikike nke inweta ume site na gburugburu gburugburu ya.
O nwere ikuku mejupụtara nitrogen na ogo dị elu na ikuku oxygen. N’ebe pere mpe anyị na-ahụ gas ndị ọzọ dị ka carbon dioxide, vepo alụlụ mmiri, argon na urukpu ntụ na nkwusioru. Ntughari a na-adaba na oge n'ime awa 24 ma ntụgharị ntụgharị ahụ na-ewe ụbọchị 365.
Ọ bụ nke ikpeazụ n’ime ìgwè mbara ala dị n’ime. Ha nọ n’ebe dị anya site na mpaghara anyanwụ 1.52 nkeji nke mbara igwe. Ọ nwere ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara ma ya mere a na-akpọ ya ụwa mbara ala. Oge ntụgharị nke a bụ awa 24 na nkeji 40, ebe ntụgharị ntụgharị gburugburu anyanwụ na-agba ya na ụbọchị 687. Ikuku a anyị na-ahụ na o mejupụtara carbon dioxide tumadi, yana obere etu mmiri, carbon monoxide, oxygen, nitrogen na argon.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mbara ala dị n'ime na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Mbara ala ime